Kononeel Mangistuu Amma Kononeel Abiyi – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooKononeel Mangistuu Amma Kononeel Abiyi
Damee Boruu: 11/24/2019
(left) 1980 – Lt. Col Mengistu Haile Mariam, Chairman of the Ethiopian provisional Military Administrative Council on TV after supposedly a failed coup . (Right) The Ethiopian TV broadcast, Col. Abiy Ahmed, Prime Minister, addresses the public on television on June 23, 2019 after supposedly a failed coup.
OPDOn silmiin dhiiga uummata Oromoo wagga sodomaaf xuuxaa turte ijaarsa Oromoo taate diigamuun baayye waan nama ajaa’ibuu qabu dha. Kaayyoon hundee ijaarsa OPDO waan uummata Oromoof bu’aa qabu diiguu, facaasuu fi mancaasuu dha. Bara EPRDF irraa kaasee amma har’aa hammeenya suukanneessaa Saba Oromoo fi qabeenya Uummata Oromoo irratti raawwatameef adda duraan kan itti gaafatamuu qabu OPDO dha. Ummatni Oromoo OPDO utuu of irraa hin darbine aduu bilisummaa arguuf wareegama qaalii akka baasuuf deemu yaroo hundaa bareechee natti mul’ata. Kanaafuu diina kamuu dura OPDO of irraa darbuun hojii keenya mana isa duraa tahuu qaba jedhee deddeebise iyyachaan ture.
Har’a garuu Kononeel Abiyiin OPDO Uummata Oromoo irra duguugee kaasuu isaaf galatoomi jechuun fedha. Yaadnii fi hawwiin isaa OPDOn ijaarsa Oromoo taate akka itti hin gufuu hin taaneef of jalaa haxxaa’e dhaaba nafxanyootaa EPP ijaarachuuf dha. OPDOs taate ijaarsonni hafan akka nama tokkotti malee akka ijaarsaa itti miseensa EPP tahuu hin danda’an. Guyyaa EPPn akka dhaabbatu murtaa’ee jalqabee OPDOn akka ijaarsatti diigamteetti(dissolved). Caasan OPDO kamuu Uummata Oromoo keessatti hojii raawwachuuf seeraa fi heera EPRDF iyyuu hin qabdu. Guyyaa kana booda Qeerroo fi Uummatni Oromoo dabbalee, kaabnee fi waan maqaa OPDO qabatee deemu mara shimalaan duguugee of keessaa baasuu qaba.
Kononeel Abiyi sii achi EPP ijaarachuuf deema jennee gowwoomuu hin qabnu. Inni Edema Birhanuu Nagaa wajjin ijaaratee qophaa’ee jira. Sii achi dhaaba EPP ijaaratee dorgomii dhufu irratti injifannoo argachuu hin danda’u jedhanii warri xibaaran jiru. Seeraanis tahe humnaan Sirna Mootummaa Nafxanoota darbe deebisee gad dhaabbuuf waan isaaf danda’ame hunda yaaluu irraa of booda hin jedhu. Kononeel Abiyi Kononeel Mangistuu caalaa abbaa irree tahee jira. Mootummaan EPRDF command postii labsuuf murtii mana maree Itoopiyaa irraa gaafachaa ture. Kononeel Abiyi mana maree biyyaaf dhiyeessuun hafee afaaniin qofaa waan ajajaa dabarsaa jiru fakkaata. Aangoon isaa daangaa darbee jira. Afaan baayyee dubbachuun isaa yaroof sobaan akka uummata burjaajessuu isa gargaaree ture.
Warra dantaa ofii jedhee akka Jawaar Mohammed,” Ilmaan Abbaa Gadaa Masaraa Minilki”seente jedhee kijibu irraa kan hafe Uummatni Oromoo bal’aan (Oromoo mass) eenyummaa Kononeel Abiyi adda baasee akka hubatu mamii hin qabu. Kan Masaraa Miniliki seene Diqaalota Habashaa qofa. Waggaa shantaman darban kana qaqalliin ilmaan Oromoo kumaatan itti wareegamanii ija injifannoo qabsoo keenyaa arguu jalqabne nu harkatti jaamsuuf nafxanyoota wajjin shira akka xaxaa jiru eenyu jalaa iyyuu dhokataa miti. Yoo uummatni Oromoo akka nama tokkotti ka’ee dhafee harka isaa hin gababsine dugugaa sanyii uummata keenya irra gahuuf baayyee na yaadessa. Dhiigni Oromoo har’as bakka hundatti akka bishaanii dhangalaa jira.
Magaalota Oromiyaa keesatti ilmaan nafxanyoota of gurmeesaanii, hidhatanii Oromoota ajjeesaa oolu. Baratoonni Oromoo Yuniversiitii Naannoo Amaaraa keessatti akka bofaa tumamaa jiru. Uummatni Oromoo ijoollee isaa maaliif biyyaa isaa itti fudhachuu dhiisee akka reefa tokko tokkon fudhachaa jiru namaaf hin galu. Yaroo tokko tokko baayyina Oromoo ol kaasuun dubbachuun nama leeyaasisa. Yaroo darbe sababa Jawwaar wajjin walqabatee honkora uumameen nama du’an keessa namni shantama Oromoo, namni digdamni Amhaara jedhame. Kunuu biyyaa Oromoo keessatti. Waan lakkobsi keenya baayyee taheef baayyee dhumuu qabnaa? Akka natti fakkaatutti diina of irraa ittisuuf waan qophii hin qabneef tasa dhumaa jirra. Haalli kun dagatmuu hin qabu. Waan Amaarri nu abaaraa, nu xiqqeessaa fi nutti sirbaa jiru haala keenya kana waan beekuuf. Dammaqnee, qophoofnee, hidhannee irree tokkichaan yoo of irraa dhoofne afaan qabachuu danda’u.
Akeekni Kononeel Abiyi biyya ceesisuu miti. Biyya Impaayeera Itoophiyaa wagga shantama of duuba deebisuu dha. Amma fedhe iyyuu haa xiqqaatu seera uumaan uummatni gara fuula duraa malee garaa duubatti hin guddatu. Mul’ani haadha isaa gaafa himatee kaasee harkaa kufee jira. Afaan dhadhaa godhee sobuun harkaa dhumtee jirti. Falaasumni ida’amuu kijibaa dhidhima seenee jira. Mee waan kana daa’ima gulantaa shanii haa gaafanu.
TPLF + ODP+ADP+SEPD = EPRDF (TPLF is a chief creator of the rest)
ODP+ADP +SEPD – TPLF + 5 (Satellites) = EPP (the master of their creation TPLF is out of the game)
Falaasuma ida’amu keessatti afur keessa tokko bahee yaroo shan itti dabalamu sagaluma taha. Madaallii maaliin akka tahu kan beeku isa duwwaa dha. Kan wal mormu lama hawwiin yookan kijibaan qofa walitti ida’amuu hin danda’u. Sababni isaa hin wal dhiiba, hin wal dhiita. Kuni seera uumaa beekumsi Kononeel Abiyi biyya lafaa raga hin qabane dha. Kanaafuu falaasuma isaa kanaa namaa hiruu dhisee kan dhuunfaa isaa haa godhatu. OPDO diiguu isaaf galata dhowwachuu hin qabnu. Amma dhiiga Uummata hin dhangalaafne yoo mootii tahe illee kan nu miidhu hin qabu.
Kononel Mangistuu Amma Kononel Abiyi Damee Boruutin, Caamsaa 31, 2018 Uummatni Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraatu…
Must listen to: Ibsaa Shanee Abiyi Oromoo Balesuf Dema Kanafuu WBO FI Qeeroon Walin dhabatanii…
ODUU AMMA NU GAHE! Adooleessa 10, 2020 #Oduu_Injifannoo_Wbo_ko!! Baga Gammadan Baga Gammannee! Wbon Gumaa Ilmaan…